ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ (ဂျာမနီ) အသင်း: June 2012
ကိုနိုင်ဝင်းအောင်+ မခင်စန္ဒာထွန်း တိုိ့ရဲ့ အလှူ
၂၇. ၀၆. ၂၀၁၂ ရက်နေ့က Göttingen မြို့တွင် နေထိုင်ကြတဲ့ ကိုနိုင်ဝင်းအောင် + မခင်စန္ဒာထွန်း တို့ ဇနီးမောင်နှံမှ အရုဏ် မုန့်ဟင်းခါးနဲ့ နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်ခြင်းတို့ကို နေအိမ်မှာပဲ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်ပြီးနောက် သီလဆောက်တည်၍ ပရိတ်တရားတော်ကို နာယူခြင်းနဲ့ ရေစက်သွန်းချ အမျှ ပေးဝေခြင်းတိုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလှူရှင် ဇနီးမောင်နှံတို့မှ သင်္ကန်းအတွက် အလှူငွေ ၇၅ ယူရို + ဗုဒ္ဓသာသန ရံသီ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအတွက် ၁၀၀ ယူရို နဲ့ ကိုကျော်ဇေယျ + မကြည်ကြည်ထွန်း မိသားစုမှ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအတွက် ၅၀ ယူရို စုစုပေါင်း ၂၂၅ ယူရိုတို့ကို လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။
အလှူရှင်များနဲ့ တကွ ဧည့်ပရိသတ်များ အားလုံး ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာကြ၍ လိုအင်ဆန္ဒများ ပြည့်ဝကြပါစေ။
ကိုကျော်ခိုင် + မမြ၀တ်ရည် မိသားစုတို့ရဲ့ နေ့ဆွမ်းအလှူ
ကိုကျော်ခိုင် + မမြ၀တ်ရည် မိသားစုတို့ရဲ့ နေ့ဆွမ်းအလှူကို ၂၃. ၀၆. ၂၀၁၂ ရက်၊ စနေနေ့က ကိုကျော်ခိုင် တို့ရဲ့ မိသားစု အိမ်မှာပဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့အလှူဆွမ်းက အုန်းဆွမ်း (အုန်းထမင်း) အလှူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဧည့်ပရိသတ်များကိုလည်း အုန်းထမင်း အချိုပွဲတို့ တည်ခင်းဧည့်ခံ ကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။
အလှူရှင်မိသားစုနဲ့ အတူ ဧည့်ပရိသတ်များ အားလုံး ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
ညီမဖြစ်သူအတွက် တစ်လပြည့်မြောက် လှူဒါန်းအမျှဝေ
ကိုမင်းစိန်လင်း ရဲ့ ဒန်ပေါက်ဆွမ်း ဆက်ကပ်ခြင်းအလှူကို အသင်းတိုက်မှာပဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ အလှူပွဲမှာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတွင် သီတင်းသုံးတော်မူသည့် ဆရာတော်ကြွရောက်လာတဲ့နေ့နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ အတွက် ပို၍ ကုသိုလ် တရားများ တိုးပွားရပါတယ်။ နံနက် ၁၁း၁၅ နာရီတွင် ဘုရားအမှူးထား၍ အလှူရှင် ကိုမင်းစိန်လင်းနဲ့ အတူ ဧည့်ပရိသတ်များက ဒန်ပေါက်ဆွမ်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ အချိုပွဲများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဧည့်ပရိသတ်များအား ဒန်ပေါက် ထမင်းဖြင့်ပင် တည်ခင်း ဧည့်ခံကျွေးမွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုမင်းစိန်လင်း ရဲ့ အလှူပွဲအတွက် ဒေါ်ခင်သန်းနွယ် (ဒေါ်နွယ်) မှ တာဝန်ယူ၍ ဒန်ပေါက်ဆွမ်းကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့အျတွက် အထူးပင် ကျေးဇူးတင် ၀မ်းမြောက်ခဲ့ ပါတယ်။ နေ့လည် ၁း၀၀ နာရီအချိန်မှာ အလှူရှင် ကိုမင်းစိန်လင်းနဲ့ အတူ ဧည့်ပရိသတ်များက ဒိန်းမတ်ဆရာတော်ထံမှ သီလဆောက်တည်ခြင်း၊ ပရိတ်တရားတော်ကို နာယူခြင်းနဲ့ ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အလှူရှင် ကိုမင်းစိန်လင်းနဲ့ တကွ ဧည့်ပရိသတ်များ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာစွာနဲ့ သာသနာ ပြုနိုင်ကြပါစေ။
ကိုမင်းစိန်လင်း ရဲ့ ဒန်ပေါက်ဆွမ်းအလှူ
ဒေါ်သိန်းမြင့်၊ ဒေါ်နွယ်၊ ကိုမင်းစိန်လင်း၊ မမြိုင်၊ မလွင်လွင်စိုး တို့ နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်နေစဉ်
ဒိန်းမတ်ဆရာတော်ထံမှ သီလခံယူ၍ တရားနာယူနေကြစဉ်
ဒေါ်နွယ် ရဲ့ ဒန်ပေါက်လက်ရာ
ကျေးဇူးရှင် မိခင်ကြီးအတွက် လှူဒါန်းအမျှဝေ
ကိုကျော်လင်း ရဲ့ အနန္တဂိုဏ်းဝင် မိခင်ကြီး ဒေါ်မြသန်း အသက် (၈၄) နှစ်အတွက် ရည်းစူး၍ ဆွမ်းခဲဖွယ် ဘောဇဉ်များကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ သင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ သီလဆောက်တည်ခြင်း၊ ပရိတ်တရားတော် နာယူခြင်းနဲ့ ရေစက်သွန်းချ အမျှအတန်း ပေးဝေခြင်းတို့ကို ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းတိုက်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဧည့်ပရိသတ်များကိုလည်း မုန့်ဟင်းခါး တို့ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ ကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီန့ဟာ လစဉ် ၁၇ ရက်နေ့တိုင်း နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်နေကြတဲ့ကိုဦး + မသန္တာ တို့ ဇနီးမောင်နှံ တို့ရဲ့ နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်နေကျ ရက်နဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက် ကိုဦး + မသန္တာ တို့ ဇနီးမောင်နှံမှ လည်း ဆွမ်းခဲဖွယ်များကို လာရောက်ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။
အလှူရှင်များနဲ့ တကွ ဧည်ပရိသတ်များ အာလုံး ကျန်းမာ၊ ချမ်သားကြပါစေ။ ကိုကျော်လင်းရဲ့ အနန္တ ဂိုဏ်းဝင် ကျေးဇူးရှင် မိခင်ကြီး ဒေါ်မြသန်း လည်း သာဓုအနုမောဒနာ ခေါ်ဆိုနိုင်၍ မြင့်မြတ်သော ဘုံဘ၀ ဘုံဌာနသို့ တက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။
ကိုကျော်လင်း မှ မိခင်ကြီး အတွက် ရည်စူး၍ သင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းနေစဉ်
ကိုကျော်လင်း ၊ Dr မြတ်ခိုင် + ဒေါ်နွယ်ဦး၊ ကိုဦး + မသန္တာ၊ မမီစံ တို့် နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းကြစဉ်